Apple weputara ohuru OS X El Capitan 10.11.5 | Esi m mac
Apple weputara osiso ohuru OS X El Capitan 10.11.5
Apple bilie taa na ike dị ukwuu ma ọ bụ na o meela ka ndị ọrụ nweta ụdị ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ OS X El Capitan 10.11.5, nke ị nwere ike ibudata ugbu a na Mac App Store, mgbe anọ ọzọ nke otu. Ọ bụghị naanị mmelite ka ewepụtara na bụ na Apple Watch na Apple TV adịworị dị ka mma.
Dị ka ị maara, Apple nọ na-ebido betas maka ụdị ọhụrụ nke OS X maka izu ole na ole ma ọ dị ka taa abụrụ ụbọchị ahọpụtara maka ụdị nke ikpeazụ iji ruo kọmputa anyị. Maraworị na eziokwu ahụ bụ na Apple wepụtara nsụgharị nke sistemụ anaghị agụpụ ya na ọdịda ọ ga-ekwe omume ọ bụkwa na site ugbu a gaa n’ihu iji ya eme ihe anyị ga-amata ma ọ bụrụ na ọ kwụsiri ike n’ezie ma ọ bụ na ọ bụghị.
Apple emeela ka ụdị OS X 10.11.5 dị ọhụrụ nye ndị ọrụ Mac niile. Nke a bụ mmelite na-elekwasị anya na imeziwanye nkwụsi ike na arụmọrụ nke usoro ahụ, na-eme ka ọ na-esiwanye ike ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Otu ihe anyị nwere ike ikwu gbanwere bụ iTunes 12.4 ọhụrụ nke nwere mmelite na igodo na ya. Maka ugbu a, anyị enweghị data ọ bụla gbasara ma agbanweela mgbanwe ndị ọzọ na mbipute ọhụrụ nke oS X 10.11. 5 dị ka na iTunes 12.4. Anyị na-ebudata ha iji nwalee ha ma mee ka ị mara.
Cheta na ọ bụrụ na ị dabere kpamkpam na otu kọmputa, anyị na-adụ gị ọdụ ka ichere ụbọchị ole na ole tupu imelite sistemụ iji rụọ ọrụ n'okpuru mkpuchi. na-ata ahụhụ irreparable data ọnwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple weputara osiso ohuru OS X El Capitan 10.11.5
Ihe 25 kwuru, hapụ nke gị
Daniel FDGP dijo
Ebe ọ bụ na ebudatara mmelite 10.11.5, kọmpụta anaghị emechi ma ọ bụ malitegharịa, ọ na-emechi onye nchọta na enweghị m ike imeghe folda ahụ mana ngwa ndị ọzọ, enyemaka ụfọdụ.
Zaghachi Daniel FDGP
Abraham Olate dijo
Otu nsogbu, melite ụbọchị ole na ole gara aga na ụfọdụ ngwa anaghị emechi, ma ọ bụ jiri mmechi mmanye ... lee anya na nyocha ọrụ na ngwa ndị ahụ egbochiri apụtaghị. Echere m na ọ nwere ike ịbụ nsogbu na java, na emeliteghị ya mana mba. Ikpeazụ ịkpụ pro mgbe ụfọdụ na-emechi na mgbe mmetụta na-agwa m ka m melite video ngosi njikwa, otu ihe ahụ na Premier. Achọpụtala m na ngwa ndị anaghị emechi n'ụzọ ụfọdụ metụtara vidiyo, dị ka launcher nke egwuregwu (ọgụ net site na blizzard) ma ọ bụ java panel yana safari mgbe m na-eji ihuenyo zuru oke mgbe ụfọdụ ọ naghị azaghachi na ihuenyo ojii ma ka ọdịyo na ndị ọzọ. Ihe a niile apụtala kemgbe m gbanwere na El Capitan mbipute 10.11.5 (The 10.11.4 rụrụ ọrụ zuru oke maka m)
Zaghachi Abraham Olate
Nick Beta dijo
Mfirihyia pii ni na Daniel FDGP na mepenee so sɛ mɛkora m’asetra so bere a na meyɛ ɔkwampaefo no.
Zaghachi Nick Beta
Obinna Iwu dijo
Enwere m nsogbu nke nyere m njehie mgbe m chọrọ ihichapụ faịlụ ma edozi ya zuru oke na nchịkọta menu - Mpụ ike - họrọ Finder wee pịa Malitegharịa ekwentị.
Ọ na-agaghị zuru ha
Alberto Bocanegra ihe osise dijo
Enweghị m ike ịgbanyụ mac ebe ọ bụ na emelitere m ka onye isi 10.11.5 nwee ike ịbe isi ma amaghị m ihe m ga-eme. biko Enyemaka
Zaghachi Alberto Bocanegra
Otu ihe ahụ mere m, enweghị m ike ịgbanyụ macbook ahụ ebe ọ bụ na emelitere m na 10.11.5, ụfọdụ ngwa enweghị ike mechie ma ọ bụ jiri mmechi mmanye, mmelite melite
Foto Monty dijo
Otu ihe a na-eme m na IMAC, ọ naghị ekwe ka m mechie, megharia, ma ọ bụ pụọ ... M malitere ịmehie m mgbe m si na 10.11.4 gaa 10.11.5.
Maka ndị anyị ga-eche, ana m enye azịza iji zere inwe gbanyụọ bọtịnụ azụ, soro usoro ndị a:
1.Turn na-ejikarị na-etinye aha njirimara na paswọọdụ.
2. Kama ị nye ya mmechi, megharia ma ọ bụ pụọ, anyị ga-enye ya ezumike.
3.Na ihuenyo nkịtị anyị pịa CHANGE USER, ọ ga-akpọrọ gị na ihuenyo ahụ.
4.We nye gị n'okpuru ndị ọrụ ka ị mechie ma ọ bụ bidogharịa.
5. Ọ ga-ezitere gị aha na paswọọdụ iji mechie nnọkọ onye ọrụ.
6.We na-enye ya ka anyị nabata ma anyị nwere ike gbanyụọ iwu ahụ n'ụzọ zuru oke, mana ọ ga-adị ngwa ngwa ma ọ rụọ ọrụ dị ka ọ dị na mbụ ...
Graciela Benitez Lopez dijo
Ee, m mekwara ihe yiri ya ka m nwee ike gbanyụọ ya, mana ọ malitere na ọdịda ọzọ: ọ maghị ileba anya ma ọ bụ ntọala ya, ọ dị ka m nwere njikọ VGA jikọtara. Alaghachila m na 10.11.4
Zaghachi Graciela Benitez Lopez
n'ụzọ ọ bụla iji laghachi na 10.11.4? mbipute ọhụrụ ahụ na-akpata m ọtụtụ nsogbu
Oge Igwe! Ọ bụ ihe kachasị mma, tupu imelite ya, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere nnomi ndabere.
Ndewo onye ọ bụla, ọ ga-amasị m ịmata ma ọ dị mkpa ịgbanwe gaa El Capitan, ọ bụrụ na ọ bara uru, enwere m Agụ owuru, enwekwara m nsogbu na-anaghị ekwe ka m jiri foto m. Enwere m ekele maka enyemaka gị !!!!!! Thanksssssss
Walter Gomez Urrego dijo
Obi ekele, otu ihe ahụ na-eme m, onye chọta ya na-ada. ebe m na-emelite mbipute 10,11.5. Imac m ga-akwụ onye ọkachamara maka ịwụnyeghachi onye isi ụgbọ mmiri ahụ na nsụgharị mbụ, na laptọọpụ m mebiri. onye nwere ike inyere anyị aka na nke a. Daalụ ….
Zaghachi Walter Gomez Urrego
Ọ na-eme m otu ihe ahụ imac, ọ naghị agbanyụ ma ọ na-arụ ọrụ nwayọ nwayọ, ọ na-enyere aka!
Ọ na-eme kpọmkwem otu !!! M na-agbalị ihe niile: akwụkwọ ntuziaka wụnye, reinstall, ihe ọ bụla. ụfọdụ sistemụ ọkwa (dị ka mmechi) dị na Bekee. Ngwọta: Agaghachiri m OS X 10.11.4 ekele maka Time Machine.
Ahụrụ m na anọghị m naanị m! Enwere m otu nsogbu ahụ. Fewbọchị ole na ole gara aga, akpọrọ m ọrụ aka ọrụ Apple ma ha gwara m na ọ bụ oge 1 na nsogbu kọrọ na OS x 10.11.5, dị egwu ọ bụghị ya?
Ọ dakwasịrị m otu mmelite ahụ na 10.11.5 ma kemgbe ahụ mgbe m gbanyụrụ Macbook Ikuku naanị Dock na-anọgide mana ọ naghị agbanyụ na m ga-eji bọtịnụ gbanyụọ ya, achọrọ m ozi na otu esi idozi nsogbu a na ihe ọ bụla m nwara ihe niile, mana maka ihe m na-ahụ, echere m na ọ bụ nsogbu na mmelite sistemụ, ugbu a, m hapụrụ ya ka ọ zuo ike na ihuenyo mechiri emechi na-eche Apple ka ọ wepụta mmelite ọhụrụ, ana m amalite iji chee echiche banyere ịme nhicha dị ọcha, ihe kachasị mkpa bụ na enwere m Macbook Pro site na etiti afọ 2012 na nke ahụ enyeghị m nsogbu, nke m megharịkwara na 10.11.5, kedu maka Apple ihe ndị a abụghị ihe a na-ahụkarị?
M sonyeere otu m na-enweghị ike imechi kọmputa! Kedụ ka aga-esi agwa ha? Achọrọ m mmelite ugbu a!
Alejandro Latorre Chirot dijo
My Mac Pro achọghị imelite na mbipute 10.11.5
Zaghachi Alejandro Latorre Chirot
hello, m nwere otu nsogbu na shutdown !!!!
Ndewo, enwere m otu nsogbu ahụ. Ihe ngwọta ọ bụla?
Nedy navarro dijo
Nnọọ!! Otu ihe a na eme m kemgbe m melite !! Find chọtara ihe ngwọta? Daalụ!
Zaghachi Nedy Navarro
My ileba anya na-agbanye ma gbanyụọ 10.11.16
Ndewo Enwere m otu nsogbu ahụ, ana m echegbu onwe m na draịvụ ike ahụ mebiri, biko mmadụ nwere echiche otu esi edozi ya, daalụ.
Ndewo, ụbọchị ole na ole gara aga emelitere m na El Capitan 10.11.5 na enwere m otu nsogbu ahụ na nkwụsị, achọtabeghị m ihe ngwọta ... ọ dị onye maara ihe enwere ike ịme? Daalụ
New iTunes 12.4 Kedu ihe ọhụrụ na ụdị ọhụụ a?
Ajụjụ ọnụ furu efu nke Steve Jobs, ugbua na Netflix